दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको एक वर्ष पूरा, आउला त माघ ८ मा संविधान ? - Artha ko Artha
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनको एक वर्ष पूरा, आउला त माघ ८ मा संविधान ?	Featured
काठमाडौं, ४ मंसीर । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भएको आज एक वर्ष बितेको छ । गत वर्ष मंसीर ४ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधानन्यायधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको सरकारले सफलतापूर्वक संविधानसभाको निर्वाचन गराएर संविधान निर्माणको मार्ग प्रशस्त गरेको थियो । सोही अनुसार राजनीतिक दलहरुले पनि संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट वर्षदिनभित्रै संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धतासहित आगामी माघ ८ भित्रै संविधान जारी गर्ने कार्यतालिका तयार गरेका थिए ।
संघीय संरचना (प्रादेशिक विभाजन), शासकीय स्वरुप तथा निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा दलहरुबीच सहमति बन्न नसक्दा माघ ८ को कार्यतालिका अझै पर धकेलिने आशंका व्यक्त गरिएको छ । किनकी यिनै तीन प्रमुख विषय पहिलो संविधानदेखि नै राजनीतिक दलहरुबीच विवादीत छन्– संघीय संरचनामा सत्तारुढ दलहरु कांग्रेस र एमालेले प्रस्तुत गरेको सात प्रदेशको विभाजनलाई प्रमुख प्रतिपक्षी एकीकृत नेकपा माओवादीले स्वीकार गरेको छैन । संघीय स्वरुपसँगै शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिय या प्रधानमन्त्रीय पद्धतिका सम्बन्धमा अझै सहमति बनिसकेको छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका या प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपतिका सम्बन्धमा बहस कायमै छ । निर्वाचन प्रणालीका सम्बन्धमा पनि समानुपातिकलाई कायम राख्ने या नराख्ने सम्बन्धमा दलहरुका आ–आफ्ना अडान छन् ।
२०६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तन अगाडीको एक दशक लामो सशस्त्र संघर्ष तथा त्यसयताको राजनीतिक संक्रमणका कारण आर्थिक विकासले गति लिन नसकेको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । “संविधान निर्माण नहुँदा लगानीकर्ताहरुमा अन्यौल कायमै छ,” अर्थविद् डा. विश्वम्भर प्याकु¥याल भन्छन्, “दलहरुले छिटोभन्दा छिटो संविधान निर्माण गरेर लम्बिदों राजनीतिक संक्रमण टुङ्ग्याउनुपर्छ ।”
संघीय संरचनामा जादाँ संघहरु आर्थिक रुपमा व्यवहारिक छन्÷छैनन् भनेर हेर्नेभन्दा राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता राख्दा दलहरुबीच विवाद बढ्दै गएको उनले बताए । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले भने संविधान जारी गर्ने कार्यतालिका हेरफेर नगर्ने र माघ ८ भित्रै संविधान जारी हुने बताउँदै आएका छन् ।